Dhiig Baxa Ku Imaado Hooyada Xiliga Ay Uurka Leedahay! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — May 18, 2019
Dhiig baxa ku imaado xilliga ay hooyada uurka leedahay, waxuu ka imaadaa xubinta taranka ee dumarka waxuuna dhacaa 24 isbuuc uurka markuu maraayo ama foosha ka hor. Waxaa loo qeybiyaa dhiigbaxa labo qaybood: Mid dhaqso imaado, uurka markuu maraayo 12 -24 isbuuc gudahood ayuu dhacaa badanaa dhiig baxaan waxaa sababa dhiciska.
Qeybta kale waa dhiig baxa soo daaho, waxuu imaadaa 24 isbuuc ka dib uurka markuu maraayo ama xiliga foosha ka hor.
Maxaa Sababa Dhiigbaxa Ku Imaado Hooyada Xilliga Ay Uurka Leedahay?
– Dhiciska ayaa sababi karo dhiigbaxa xilliga ay hooyada uurka leedahay.
– Ibida oo cunuga ka soo hormarto
– Ibidi oo meeshii loogu tala galay ka soo fuqdo
– Uur dibadeed, uurka oo ku abuurmo meel ka baxsan minka
– Dilaac ku imaado minka
Calaamadaha Lagu Garto Dhiigbaxa Hooyada Ku imaado Xilliga Ay Uurka Leedahay.
o- Dhiig bax ka imaado xubinta taranka
o- Xanuun minka xagiisa ah
o- Afka ilmo galeen oo furmo mararka qaar
o- Ilmaha oo xaladiisa halis gasho
Dhibaatoyinka Ka Dhalan kara Dhiigbaxa ka Imaado Hooyada Xiliga Ay Uurka Leedahay
Dhiig yari ku imaado hooyada
Infekshon ku dhaca hooyada
Hooyada inay shook qaado waxaad ku arkaysaa calaamadahan: hooyada in lagu arko wadna garaac badan, wareer, tabardaro, matag iyo lalabo, qaboob inuu noqdo maqaarka hooyada.
Dhiigbax ku imaado hooyada markay dhasho ka dib
Waqti badan inay joogto isbitaal
Dhibaatoyin ka dhalan kara dhiig ku shubida
«- Cunuga oksijiinkisa oo yaraato
«- Cunaga oo ku dhasho 37 isbuuc ka yar
«- Cunuga oo dhinto
Sidee Looga Hortagi Karaa dhiigbaxaan
§- Jugta inaan ka ilaalino hooyada
§- Inay booqato hooyada xarun caafimaad
§- Wax yalaaha culeeyska inay qaado hooyada waa inaan ka ilaalinaa
§- Markasta inay la xariirto hooyada dhaqtar taqasuus u leh cilmiga uurka iyo dhalmada.
§- Markay hooyada ogaataba inay uur leedahay waa inay aadaa xarun caafimaad, oo la socataa xalkeeda ilaa ay ka dhasho.
Dhammaan hooyinka Soomaaliyeed waxan kula talin lahaa inay booqashada xarun caafimaad ay joogteeyaan, marka ay hooyada dhiigbax isku aragto waa inay yareesan hooyinka qaar ayaa ka xishooda sheegida dhiig baxaas waxaa u badan arintaas hooyoyinka da’ada yar, hooyinka soomaliyeed waa in ay ogaadaan caafimaad hooyada iyo cunugeeda inay muhiim u tahay bulshada.
Waxaan kaloo kula talin lahaa hooyoyinka soomaaliyeed ,oo garanaayo aqrinta waa inay isku taxluujiyaan inay barantaa sidii lola tacaali lahaa dhiig baxa ka imaada hooyada. Markaas waxaa yaraanaayo aqoon la,aanta hooyoyinka soomaliyeed uleeyihiin dhiig baxaa.
Tags: Dhiig Baxa Ku Imaado Hooyada Xiliga Ay Uurka Leedahay
Next post Waa maxay Ilowshaha iyo Sababaha Hilmaanka Keena?
Previous post Dheecaanka Ku Jira Isgalka Lafaha